Book – Page2– Muslim Book
“ဇုလ်ဟဂ်ျလ” ပထမဆယ်ရက်အားအကျိုးရှိစွာအသုံးချရမည့် အမလ်
Mohamed Rahin | July 22, 2020
“ဇုလ်ဟဂ်ျလ” ပထမဆယ်ရက်အားအကျိုးရှိစွာအသုံးချရမည့် အမလ် “ဇုလ်ဟဂ်ျလ” ပထမဆယ်ရက်အားအကျိုးရှိစွာအသုံးချနိုင်ရန် ဟဇရသ်မော်လာနာမွဖ်သီသကီး (အွစ်မာနီး)မှ လွယ်ကူသောနည်းလမ်းများညွှန်ကြားပြသထားပါသည်။ လုပ်ငန်းခွင်ဝင်နေရသူများ ၎င်းအိမ်မှုကိစ္စများကြောင့်အိဗာဒသ်အတွက်သီးသန့်အချိန်မထုတ်နိုင်သူများအနေနှင့်အောက်ဖေါ်ပြပါအချက်များပြုကျင့်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် “ဇုလ်ဟဂ်ျလ”၏ ပထမဆယ်ရက်အားအကျိုးရှိစွာအသုံးချ နိုင်မည်ဖြစ်ပေသည်။ ၁။ တတိယကလိမဟ်အား တက်နိုင်သလောက်ဖတ်ပါ။ (သွားလာရင်းပင်ဖတ်နိုင်ပါသည်)/ ၂။ တနေ့ကိုအနည်းဆုံး ၁၀မိနစ်၁၅မိနစ် ကုရ်အာန်သေလာဝသ်လုပ်ပါ/ ၃။ မဂ်ရိဗ်နမားဇ် (၇) ရကအသ်ဖတ်ပြီး နဖိလ် (၂) ရကအသ်အား
Mohamed Rahin | July 20, 2020
ဆယ်ခုသောအရာသည်အရာဆယ်ခုကိုတားမြစ်သည် (၁)#စူရာဟ်ဖာသိဟဟ် သည် အလ္လာဟ်ဟုအသျှင်မြတ်၏အမျက်တော်ကို တားမြစ်သည်/ (၂)#စူရာဟ်ယာစီးန် သည် ကိယာမသ်နေ့တွင်ရေဆာလောင်မူ့ကို တားမြစ်သည်/ (၃)#စူရဟ်ဒုခါန်း သည်ကိယာမသ်နေ့၏ကြောက်မက်ဖွယ်ရာများကို တားမြစ်သည်/ (၄)#စူရဟ်ဝါကိအဟ် သည် ငတ်မွတ်ခြင်းကို တားမြစ်သည်။ (၅)#စူရဟ်မုလ်က် သည် ကဗရ်၏အဇားဗ်ကို တားမြစ်သည်/ (၆)#စူရဟ်ကောင်စရ် သည်ရန်သူတို့၏ပြသနာ ပြုခြင်းကို တားမြစ်သည်/ (၇)#စူရဟ်ကာဖိရူးန် သည်အသက်ထွက်ကာနီး အသက်ငင်ချိန်တွင်’ကုဖ်ရ်’ မှ
ကဇွာဖြည့်​ရန်​ လွယ်​ကူ​သော နည်းလမ်းများ တစ်​​နေ့တာ နမာဇ်​များတွင်​ ဖရပ်​ဇ်​အားလုံးနှင့်​ ဝါဂျစ်​ဗ်​နမာဇ်​၏ အ​ရေအတွက်​သည်​ ရကအသ်​(၂၀)ဖြစ်​သည်​။ ဖဂျရ်​ (၂) ရကအသ်​၊ ဇွဟ်​ရ်​ (၄) ရကအသ်​၊ အဆွရ်​(၄) ရကအသ်​၊ မဂ်​ရိဗ်​ (၃) ရကအသ်​၊ အီရှာ(၄)ရကအသ် ​နှင့်​ ဝိသ်​ရ်​ (၃) ရကအသ်​ အားလုံး​ပေါင်း ရကအသ်​ (၂၀)
Mohamed Rahin | July 10, 2020
ဤကလီမာဟ်တော်၏ အကျိူး ၇ချက် အကြင်သူဟာ အထီးကျန်မူနှင့် စိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့စရာတွေနဲ့ ကြုံတွေ့နေချိန်သို့မဟုတ် နေ့စဉ်နေ့တိုင်း နံနက်နဲ့ ညနေ ညတို့တွင် ၁၀ကြိမ်မျ ဖတ်ရွတ်ပါက တမန်တော် အီစ္စမိုင်း (A.S)၏ သားတော်ရရှိတဲ့ စဝါးဗ်ကို ရရှိပေမည်။ မည်သူမဆို နံနက် နှင့်ညတွင် ၁၀ကြိမ်ဖတ်ရွတ်ပါကကြီးမားတဲ့ ကောင်းချီးရဟ်မသ် ၁၀ခုရရှိမည်။ ပြစ်မူဂိုနာဟ် ၁၀ခု ဖယ်ရှားခြင်းခံရမည်။
Mohamed Rahin | July 9, 2020
ဤဒိုအာ၏ အကျိုးကျေးဇူး နဗီတမန်တော်မြတ်(ဆွ)ကိုယ်တော်အမိန့်ရှိတော်မူသည်မှာ အကြင်သူသည် နေ့စဉ်အောက်ပါဒိုအာကိုအကြိမ်(၇၀၀)ဖတ်ခဲ့မည်ဆိုလျှင်ထိုသူသည် ဆင်းရဲကြပ်တည်းမှု့ မှ ခိုလှုံမှု့ ရရှိမည်။ စိုးထိတ်အထီးကျန်ခြင်းမှ လွတ်မြောက်မူရရှိမည်။ စည်းစိမ်ဥစ္စာချီးမြှင့်ခြင်းခံရမည်။ ထို့ပြင်ထိုသူအတွက်ဂျန္နသ်သုခဘုံ၏တံခါးများ ဖွင့်ပေးခြင်းခံရမည်။ (ကန်ဇွလ်အမလ်ကျမ်း။ဟဒီးစ်အမှတ်-၅၀၅၅). နဗီတမန်တော်မြတ်(ဆွ)ကိုယ်တော်အမိန့်ရှိတော်မူသည်မှာ အကြင်သူသည် နေ့စဉ်အောက်ပါဒိုအာကိုအကြိမ်(၇၀၀)ဖတ်ခဲ့မည်ဆိုလျှင်ထိုသူသည် ဆင်းရဲကြပ်တည်းမှု့ မှ ခိုလှုံမှု့ ရရှိမည်။ စိုးထိတ်အထီးကျန်ခြင်းမှ လွတ်မြောက်မူရရှိမည်။ စည်းစိမ်ဥစ္စာချီးမြှင့်ခြင်းခံရမည်။ ထို့ပြင်ထိုသူအတွက်ဂျန္နသ်သုခဘုံ၏တံခါးများ ဖွင့်ပေးခြင်းခံရမည်။ (ကန်ဇွလ်အမလ်ကျမ်း။ဟဒီးစ်အမှတ်-၅၀၅၅).
ကြောက်မက်ဖွယ်ရာ ဟဒီးဆ်တော် တစ်ပုဒ် တစ်ရက်တမန်တော်မြတ်ကြီး(صلىالله عليه ﻭﺳﻠﻢ) နဗဝီဝတ်ကျောင်းတော်၌ရှိနေစဉ် လုလင်ပျိုတစ်ဦးငိုလျက်တံခါးဝသို့ရောက်ရှိလာသည်။ တမန်တော်မြတ်ကြီး(صلىالله عليه وسلم)ကအကျိုးအကြောင်းမေးမြန်းရာ ၎င်းနှင့်၎င်း၏ဖခင်တို့ခရီးထွက်လာရင်းဖခင်ကြီးမှာလမ်း၌အလ္လာဟ့်အမိန်တော်ခံယူသွားပါသည်။ ရေချိုးရန် ဂျနာဇာဟ်နှင့် ဒဖန်ပြုပေးရန်တစ်ဦးတစ်ယောက်မျှမရှိပါဟု လျှောက်ထားရာ တမန်တော်မြတ်ကြီးက ဟဇရသ်အဗူဗကရ်(ရသွေ့)နှင့်ဟဇရသ်အုမရ်(ရသွေ့)သခင်ကြီးနှစ်ပါးအားစေလွှတ်လိုက်သည်။ ထိုနေရာအရောက်တွင်မည်းနက်နေသော ဝက်ကြီးတစ်ကောင်ကိုမြင်ရ၍ဆွဟာဗာကြီးနှစ်ပါးမှာ အလွန်ထိတ်လန့်ကာတမန်တော်ကြီးထံသို့ပြန်၍လျှောက်တင်လေသည်။ အဲ့ဒီနောက် တမန်တော်ကြီးကိုယ်တော်တိုင်လိုက်သွားပြီး ဒိုအာတောင်းခံပေးရာနဂိုပုံစံအတိုင်းဖြစ်သွားပြီးနောက်ရေချိုး ဂျနာဇာဟ်ဖတ်ပေးပြီးဒဖန်ခါနီး၌ မိုင်ယာဒ်မှာဝက်အမည်းကြီးပြန်ဖြစ်သွားလေသည်။ အဲ့ဒီအခါမှာတမန်တော်မြတ်ကြီး(صلىالله عليه
ညအိပ်ယာမ၀င်မီ စူရဟ်ကဒရ်(7)ကြိမ်ရွတ်ဖတ်ခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူး ညအိပ်ယာမ၀င်မီ စူရဟ်ကဒရ်(7)ကြိမ်ရွတ်ဖတ်ခြင်းဖြင့်ရိုဇီရိက္ခာကြွယ်ဝစေသည်။ စက္ခုအာရုံလင်းဝင်းစေသည်။ လေငန်းရောဂါပျောက်ကင်းစေသည်။အာခိရသ်တမလွန်ခရီးအတွက်လွယ်ကူစေသည်။ ညအိပ်ယာမ၀င်မီ စူရဟ်ကဒရ်(7)ကြိမ်ရွတ်ဖတ်ခြင်းဖြင့်ရိုဇီရိက္ခာကြွယ်ဝစေသည်။ စက္ခုအာရုံလင်းဝင်းစေသည်။ လေငန်းရောဂါပျောက်ကင်းစေသည်။အာခိရသ်တမလွန်ခရီးအတွက်လွယ်ကူစေသည်။ ညအိပ်ယာမ၀င်မီ စူရဟ်ကဒရ်(7)ကြိမ်ရွတ်ဖတ်ခြင်းဖြင့်ရိုဇီရိက္ခာကြွယ်ဝစေသည်။ စက္ခုအာရုံလင်းဝင်းစေသည်။ လေငန်းရောဂါပျောက်ကင်းစေသည်။အာခိရသ်တမလွန်ခရီးအတွက်လွယ်ကူစေသည်။ ညအိပ်ယာမ၀င်မီ စူရဟ်ကဒရ်(7)ကြိမ်ရွတ်ဖတ်ခြင်းဖြင့်ရိုဇီရိက္ခာကြွယ်ဝစေသည်။ စက္ခုအာရုံလင်းဝင်းစေသည်။ လေငန်းရောဂါပျောက်ကင်းစေသည်။အာခိရသ်တမလွန်ခရီးအတွက်လွယ်ကူစေသည်။ Credit, ညအိပျယာမဝငျမီ စူရဟျကဒရျ(7)ကွိမျရှတျဖတျခွငျး၏ အကြိုးကြေးဇူး ညအိပျယာမဝငျမီ စူရဟျကဒရျ(7)ကွိမျရှတျဖတျခွငျးဖွငျ့ရိုဇီရိက်ခာကွှယျဝစသေညျ။ စက်ခုအာရုံလငျးဝငျးစသေညျ။ လငေနျးရောဂါပြောကျကငျးစသေညျ။အာခိရသျတမလှနျခရီးအတှကျလှယျကူစသေညျ။ ညအိပျယာမဝငျမီ
Mohamed Rahin | July 7, 2020
အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး၏ ” နမာဇ်”ဖတ်ပုံ ဖတ်နည်း၌ ကွဲလွဲခြားနားသော အချက်များ ၁ ။ “တက့်ဗီရေ တဟ်ရီမဟ် ” အလ္လာဟု အက့်ဗရ် ဆိုသောအချိန် အမျိုးသားများသည် ဝတ်ရုံ ခြုံထည် စသည်တို့မှ လက္ကို အပြင်ထုတ်၍ နားအထိလက္ကို မြှောက်ရမည်။ အမျိုးသမီးများသည် အခြေအနေတိုင်းတွင် လက်ကိုခြုံပဝါအတွင်းမှ မထုတ်ဘဲ ပခုံးအထိ
နမားဇ်(၅)ကြိမ် အချိန်မှန်ဝတ်ပြုသူရရှိမည့် ဂုဏ်သိက္ခာ (၉)မျိုး
နမားဇ်(၅)ကြိမ် အချိန်မှန်ဝတ်ပြုသူရရှိမည့် ဂုဏ်သိက္ခာ (၉)မျိုး နမားဇ်ငါးကြိမ်ကို အချိန်မှန်မှန်ဝတ်ပြုသူအား အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် (၉)မျိုးသော ဂုဏ်သိက္ခာကို ချီးမြင့်ပေးသနားတော်မူလိမ့်မည်။၎င်းတို့မှာ ၁။ နမာဇ်ဝတ်ပြုသူအား အလ္လာဟ်အရှင်မြတ် ချစ်ခင်နှစ်သက်တော်မူလိမ့်မည်။ ၂။ ၎င်း၏ ခန္ဓာကိုယ် ကျန်းမာနေစေလိမ့်မည်။ ၃။ ဖရှိစ်ရ်ှသာများ၏ စောင့်ရှောက်မှု့ ကို ခံရလိမ့်မည်။ ၄။ ထိုသူ၏ နေအိမ်၌ ဗရ်ကသ် မင်္ဂလာများ
မိဘဖြစ်သူအား (အိုးးဟ် )ဟူ၍ပင်မပြောဆိုလေနှင့်
မိဘဖြစ်သူအား (အိုးးဟ် )ဟူ၍ပင်မပြောဆိုလေနှင့် အသင်၏ မိဘနှစ်ဦးစလုံးသော်လည်းကောင်း နှစ်ဦးအနက်မှတစ်ဦးသော်လည်းကောင်း အသင်၏ ရှေ့မှောက်တွင် အသက်အရွယ်ကြီးရင့်ခြင်းသို့ရောက်လတ်သော် အသင်သည်မိဘဖြစ်သူအား (အိုးးဟ် )ဟူ၍ပင်မပြောဆိုလေနှင့် ပြီးနောက် ဆူပူငေါက်ငမ်းခြင်းလည်းမပြုလေနှင့်။ ၄င်းမိဘဖြစ်သူတို့အား အလွန်မွန်မြတ်ချိုသာသော စကားကိုသာပြောဆိုပါလေ။ (ကုရ်အာန်)စူရဟ်အစ်ရားအ် အိုAllahအရှင်မြတ် ကျွန်တော်မျိုးနှင့် မွတ်စလင်မ်ညီအစ်ကိုမောင်နှမများအားလုံး၏ မိဘများကို လောကဒွန္နယာတွင်လည်း ငြိမ်းချမ်းစွာထားတော်မူပါ။ အာခေရသ်တွင်လည်းး ဂျန္နသွလ် ဖွင်ရ်ဒေါင်စ် ကိုချီးမြင့်တော်မူပါ။